Iyini inzuzo Swiss CNC umshini kuqhathaniswa zezinombolo ukulawula lathe? - China Shandong okusha Ankai-Kitco
Okhahlamba umshini CNC kungokwalabo imishini ukucacisa ukucubungula, futhi ungakwazi ukuqedela machining eyinkimbinkimbi imoto, Milling, imishini, isidina, lekubazeni carving ngesikhathi esifanayo. It is ikakhulukazi esetshenziselwa batch ukucutshungulwa ngokunemba hardware nesicu izingxenye ekhethekile emise angajwayelekile.
Ngoba isakhiwo umshini ukuhamba lihlukile bendabuko zezinombolo ukulawula lathe, le machining kahle futhi machining ikwazi umshini ukuhamba ziphakeme kunezindlela ukuthi we NC lathe. Thatha izinhlungu nge ilungiselelo biaxial kwaleli thuluzi design, silondoloza kakhulu ukucutshungulwa umjikelezo isikhathi, indlela exchange isikhathi ithuluzi ithuluzi umshini by kunciphisa ummese, multi ithuluzi esiteshini ukugqagqana nentambo chip Axial ngempumelelo ezihambayo imisebenzi ezedlulayo, uthi lokuphotha oqondile nangenkomba umsebenzi izikhathi ezimbili phakathi kwenqubo, sifishane sikhatsi cleaner. Ithuluzi Chip ahlabayo ifeza indima ebaluleke kakhulu ohlelweni machining of othini lokuphotha kanye workpiece clamping izingxenye. Inikeza isiqinisekiso esinamandla sokuba njalo machining ukunemba. Esikhathini ngenxa yokuthi inhliziyo umshini emakethe, 38mm kuyinto ngobukhulu ukucutshungulwa ubukhulu bayo, okwenza umshini ukuhamba usesikhundleni inzuzo enkulu e ngokunemba-eksisi ukucutshungulwa emakethe. Lolu chungechunge umshini amathuluzi kungabuye ifakwe idivayisi yokudla okuzenzakalelayo, okuyinto uyaqaphela ukukhiqizwa ngokuzenzakalela ngokugcwele single umshini ithuluzi, kunciphisa zabasebenzi Izindleko kanye nemikhiqizo ezimbi inqubo ukukhiqizwa, futhi ingasetshenziswa ukukhiqiza inqwaba ngokunemba kushaft izingxenye.
Ukusebenza kahle machining kanye machining ukunemba kuka NC lathe bekulokhu eqa qualitative, ngenxa double ilungiselelo ithuluzi, ukunciphisa kakhulu isikhathi ukucubungula umjikelezo, nesikhathi ukushintshanisa ithuluzi ithuluzi umshini by kunciphisa ummese, multi ithuluzi esiteshini ukugqagqana umsebenzi, intambo ukusika Axial ngempumelelo ezihambayo imisebenzi ezedlulayo, oqondile lokuphotha nangenkomba umsebenzi amabili esikhathini lapho ukucubungula, bona isikhathi mfushane. Ithuluzi ahlabayo njalo machined ku clamping ingxenye othini lokuphotha kanye workpiece, iqinisekisa ukunemba njalo ukunemba machining. Njengamanje, esiphezulu machining ububanzi umshini wenhliziyo emakethe 38mm, futhi has a inzuzo enkulu in the ngokunemba-eksisi ukucutshungulwa emakethe. Lolu chungechunge umshini amathuluzi kungenziwa ifakwe othomathikhi kudivayisi yokudla ekubonile ukukhiqizwa ngokuzenzekelayo umshini ithuluzi elilodwa, tinhlelo kanye nekunciphisa tindleko zabasebenzi kanye izinga elingalungile komkhiqizo. Kuyinto efanelekile kakhulu ekukhiqizweni ngokunemba kushaft izingxenye.